भिक्टोरियामा एकैदिन ७ सय २३ नयाँ व्यक्तिमा संक्रमण, १३ जनाको मृत्यु ! « MNTVONLINE.COM
भिक्टोरियामा एकैदिन ७ सय २३ नयाँ व्यक्तिमा संक्रमण, १३ जनाको मृत्यु !
अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा अहिलेसम्मकै उच्च संक्रमण देखिएको छ । एकैदिन १३ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ भने गत २४ घण्टामै ७ सय २३ नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रिमियर डेनियल एन्ड्रयूले यस विषयमा जानकारी दिनेछन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले भने श्रोतहरुलाई उद्धृत गर्दै यस विषयमा समाचार प्रकाशित गरिसकेका छन् । साथै स्थानीय सञ्चारमाध्यममा एक एज्ड केयरमा शवलाई कार्पेटमा बेरेर बाहिर निकालिएको दृश्य सार्वजनिक भएको छ ।
यसले भयावह स्थिति चित्रण गरेको धेरैले मानेका छन् । ईपिंगको नर्सिंग होममा मात्रै कोरोनाका ८६ संक्रमित देखिएका छन् । जसमध्ये २७ जना कर्मचारी र ५९ जना त्यहाँ बस्ने बृद्धबृद्धा छन् । अहिलेसम्म २ जनाको ज्यान गइसकेको छ । भिक्टोरियाका ८७ वटा एज्ड केयर होमहरुमा अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमण देखिइसकेको छ ।
नेपाली समूदायलाई सतर्क रहन आह्वान
यसैबीच, भिक्टोरियामा रहेको नेपाली समूदायलाई यस महामारीकाबीच सतर्क रहन र सावधानी अपनाउन भिक्टोरियाका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत चन्द्र योन्जन, नेप्लीज एशोसिएसन अफ भिक्टोरियाका अध्यक्ष तारा गैरे र एनआरएन अष्ट्रेलियाका भिक्टोरिया संयोजक प्रेम कँडेलले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेका हुन् । उनीहरुले भिक्टोरियामा धेरैजसो नेपाली सेवाका क्षेत्रमा कार्यरत रहेको भन्दै यिनमा अझ बढी सतर्कता अपनाउनुपर्ने भनेका छन् । यस्तो छ विज्ञप्ति –